CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line
TPU (thermoplastic polyurethane) taratasy dia manana toetra tsara fihenjanana avo, fihenjanana avo, henjana sy fahanterana fanoherana, ary manana toetra tsara ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy poizina, anti-hamamo sy anti-bakteria, mitafy sy ny harafesiny fanoherana, biocompatibility sns. . Izy io dia be mpampiasa amin'ny kiraro, akanjo, kilalao tsy azo afangaro, rano sy fitaovana fanatanjahan-tena anaty rano, fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana fanatanjahan-tena, kojakoja fipetrahana fiara, elo, valizy, kitapo hoditra, sns. Azo ampiasaina amin'ny vera tsy misy bala koa izy io, fitaovana fonosana .
TPU dia nanjary nalaza kokoa noho ny fahombiazany sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, TPU dia azo ampiasaina ho solon'ny PVC na aiza na aiza no ampiasaina ny PVC. Ny sarimihetsika TPU dia tsy azo fehezina amin'ny lamba isan-karazany, fa azo ampiasaina hamokarana vokatra mazava tsara sy habe azo antoka amin'ny thermoforming banga. Miaraka amin'ny fampitomboana ny fahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana any Shina, ny vokatra TPU dia be mpampiasa kokoa. Anisan'izany, ny faritra mitombo haingana dia ny firakofana kiraro, atin'akanjo mafana, atin'akanjo mangarahara, fehin-tsoroka mangarahara, fehikibo elastika ary kasety mifoka rivotra.
Ny tsipika famokarana dia mandray ny fomba fitrandrahana sy ny horonan-taratasy miforona mba hamokarana ravina manana hatevin'ny 0.05-2 mm sy ny sakan'ny 1000-2000 mm, ao anatin'izany ny ravina mangarahara, ravina miloko ary ravina mitambatra amin'ny fitaovana samihafa.
Composition an'ny TPU Production Line
1. Extruder visy tokana
2. Fanovana efijery Hydraulika
3. paompy fandrefesana
5. Fitaovana mandrakotra sarimihetsika
7. Rafitra fanaraha-maso ny mari-pana
8. Fampangatsiahana fonosana sy fitaovana fampihenana
9. Traktera, Fitaovana fanodinana fako
10. Winder-toerana roa
11. Rafitra fanaraha-maso feno herinaratra
12. Fitaovana fanampiana
HIVERINAFitaovana tena tsara CHINAPLAS2019 - Masinina fametahana tsofina roa sosona
NEXTCHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara - Andalana famolavolana modely PP Hollow Building Template roa